जनवरी 2020 | एक ट्रेन सेव
महिना: जनवरी 2020
घर > जनवरी 2020
पढ्ने समय:5मिनेट एम्स्टर्डम यात्रा गर्न एक भव्य शहर हो. हेर्न र तपाईं शायद प्राप्त नरमाइलो कहिल्यै हुनेछ यहाँ गर्न धेरै छ. तथापि, यो अझै पनि कुराहरू माथि मिश्रण ठूलो हुनेछ. That is because Amsterdam isagreat starting point for several amazing…
कसरी यात्रा पर्यावरण हितैषी मा 2020?
पढ्ने समय:5मिनेट हामी यो नयाँ दशक प्रवेश रूपमा पर्यावरण मैत्री यात्रा हाम्रो मन को Forefront छ. यस्तो रबर्ट हंस र Greta Thunberg रूपमा पर्यावरण कार्यकर्ता संग, संसारको गर्न सन्देश क्रिस्टल स्पष्टता साथ बुझाइएको भइरहेको छ. We are running out of time to…
ट्रेन द्वारा व्यापार यात्रा, इको यात्रा सल्लाह, ट्रेन यात्रा, ट्रेन यात्रा सल्लाह
पढ्ने समय:6मिनेट तपाईं बस जर्मनी Bavaria मार्फत एक यात्रा योजना सुरु गरेको छ भने, तपाईं शायद यात्रा बारे सोच रहे. तपाईं सम्भवत यात्रा गर्न अचम्मको स्थानहरूको सरासर नम्बर बढ्तै छन्. प्लस, तपाईं एक सबै तिनीहरूलाई फिट गर्न चाहनुहुन्छ 10 days itinerary…
पढ्ने समय:6मिनेट फ्लोरेन्स रहन एउटा अचम्मको ठाउँ छ र त्यहाँ के गर्न टन छन्. तर, तपाईं यो राजधानी बाहिर उद्यम गर्न खोजिरहेको छ भने, हामी तपाईंलाई ढाकिएको मिल्यो. त्यहाँ फ्लोरेन्स देखि सिर्फ एक रेल सवारी टाढा छन् कि यात्रा गर्न केही अचम्मको ठाउँ हुन्. यहाँ…
5 सबैभन्दा प्रसिद्ध सडकमा पेरिस हेर्नुहोस्
पढ्ने समय:4मिनेट त्यहाँ पेरिस बारेमा प्रेम गर्न धेरै छ. जहाँ तपाईं पनि सुरु गर्छन्, दायाँ? मनमा आउने पहिलो कुरा एफिल टावर र Louvre जस्तै ठूलो साइटहरु छ. तर पनि किन शहर मा लुकेका रत्न पत्ता छैन? Let us start with…
पढ्ने समय:5मिनेट यो केवल चयन गर्न कठिन छ5सजिलो दिन तपाईं साझेदारी गर्नुहोस् मिलान रेल देखि यात्रा. इटाली फैशन राजधानी को भ्रमण पर्यटक लागि विकल्प संग resplendent छ. मात्र यो फैशन भरिएको छ, तर यो एक अविश्वसनीय इतिहास छ, वास्तुकला र सुन्दर…
पढ्ने समय:7मिनेट त्यहाँ कुराहरू पेरिस लागि जानिन्छ को धेरै छ. तर पेरिस गर्न फ्री कुराहरू यसको लागि जानिन्छ केही छैन. यो संसारमा सबै भन्दा रोमान्टिक ठाउँ मध्ये एक हुनुको लागि प्रसिद्ध छ. फेशन राजधानी र साहित्यिक स्वर्ग पनि!…